Sarkaal sare oo ka tirsan kooxda ISIL oo gobolka Allepo lagu dilay – The Voice of Northeastern Kenya
Sarkaal sare oo ka tirsan kooxda ISIL oo gobolka Allepo lagu dilay
starfmke August 31, 2016
Afhayeenka kooxda isu magacawday khilaafada Islaamka ee Isil Abu Mohamed al-Adnani ayaa waax lagu dilay gobolka Allepo ee kuyaala waddanka Syria sida u shaaca ka qaaday website loola xiriirinaayo kooxdan.
Amaq oo ah warbaahin loola xiriirinaayo kooxda ISIL ayaa waxa ay maalinta shalay ahayd sheegtay Adnani la dilay xili u hawlo kormeer ah oo military uu u joogay gobolka Allepo.
Adnani oo ah sarkaalka labaad ee ugu sareeyo kooxda ISIL ayaa waxa u kamid ahaa sarkaalada mudada dheer ka hawlgali jiray kooxdaas.
Warbixinada ku aadan dilka Adnani ayaa ah mid aan cadeyn.
Sarkaal sare oo ka tirsan militariga waddanka Maraykanka ayaa waxa u galinki dambe ee shalay uu u sheegay wakaalada wararka ee Reuters in u sarkalkaas laga dilay kooxda ISIL u ku dhintay duqeymo dhinaca cirka ah oo ay iyaga ka fuliyeen gobolkaas.
Ninkan la dilay ayaa waxa u ahaa xubin muhiim ah oo ka tirsan kooxda sanbadihi ugu dambeeyay iyado la sheegay in u intarnetka soo dhigaayay codad u ku dhiiri galinaayo dagaalyahanada kooxda in ay laba labaan weerarada ay qaadan.
Sanadki 2000 ayay ahayd marki u Adnani sheegay in u daacad u yahay hoggaamiyaha al-Qaacidada Iraq Abu Musab al-Zarqawi waxana loo diray in u ka dagaalamo waddanka syria sanadki 2011-ka kadib marki u 3 sano ku soo qaatay xabsiga.
← Codbixiyaasha dalka oo la sheegay in aysan ku qanacsaneyn IEBC
Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo maanta billaabaya booqasho uu ku tagayo gobolka xeebta →